Injection Molding Izikhungo Umkhiqizi - CBPMM
Umjovo udini kuyinto senqubo yokukhiqiza okuyinto ekahle ekukhiqizeni imikhiqizo ezifanayo futhi uhambisane kakhulu izinto eziningi ngobuningi.
Umjovo udini umkhakha likhula ngokushesha futhi ngo-2016, i-global umjovo udini umkhakha kwalinganiselwa ukuthi zenani USD 283,54 bhiliyoni.
Polypropylene kwaba izinto esetshenziswa kakhulu zokusetshenziswa lokulandisa 36% we funa Imininingwane, kulandele i-ABS ne -25% izimfuno 2016.
I-Asia-Pacific wabusa odingekayo emhlabeni imikhiqizo umjovo olubunjiwe yathola 37% we funa Imininingwane ngo-2016.
Imikhiqizo eminingi ngokuvamile esetshenziselwa ukwenza ekuphileni kwansuku zonke ekhiqizwa usebenzisa muphi umjovo inqubo yokubumba. Umjovo udini kuyinto inqubo enhle ukukhiqizwa ukuthola imikhiqizo eliphezulu ngamanani kakhulu engabizi.
Izinzuzo Injection Molding
Umjovo udini umkhakha lukhula exponentially. Umjovo udini wenziwa ngokwethukela kusetshenziswa kakhulu ekukhiqizeni imikhiqizo eminingi.
Inqubo yokukhiqiza kunezinzuzo eziningi phezu ezinye izindlela. Ezinye izinzuzo ezibaluleke kakhulu kokusebenzisa umjovo udini imikhiqizo yokukhiqiza zimi kanje:
Umjovo udini kuyinto kakhulu esebenza kahle yokukhiqiza inqubo. Inqubo kakhulu okuzenzakalelayo futhi ilawulwa amarobhothi futhi imishini okuyinto zingalawulwa kalula kakhulu futhi ephethwe i-opharetha.
Inqubo wokwakha umkhiqizo kuyaphindeka kakhulu futhi enokwethenjelwa angasetshenziswa ukukhiqiza inqwaba imikhiqizo engama ezifanayo futhi senziwe njalo.
Ngenxa uhambisane kakhulu yokukhiqiza inqubo, kuba lula kakhulu ukuqinisekisa ukuvumelana e imikhiqizo kanye brand. Umjovo udini kunikeza cishe ayinamaphutsa yokukhiqiza inqubo.
Imikhiqizo ekhiqizwa ngesikhathi esincane kakhulu. Izikhathi Specific ukukhiqizwa zincike kushuba butholakala enqubweni eyinkimbinkimbi yokuthela umklamo kodwa ngokwesilinganiso 15-20 imizuzwana yisikhathi phakathi umjikelezo ngamunye.
I izinga lemikhiqizo nansi enye inzuzo Umjovo udini. Imikhiqizo ekhiqizwa kukhona engasindi futhi iqine.
Imikhiqizo ekhiqizwa usebenzisa umjovo udini kungukuthi wajoyina noma ashiselwe, kunalokho zenziwa ovela isikhunta olulodwa. Lokhu kwandisa umthelela-ukudaza inkani futhi ngamandla eqine imikhiqizo.
Ukwenza usebenzisa umjovo udini kakhulu engabizi . Ingxenye enkulu izindleko nezisetshenziswa babambeke ngesikhathi umkhiqizo ukwakha okuklama of isikhunta ukukhiqizwa.
Uma umkhiqizo kanye isikhunta siklanyelwe, senqubo yokukhiqiza kuyashesha kakhulu. Izinto eziningi imikhiqizo kungenziwa ekhiqizwa ngesikhathi esincane kakhulu usebenzisa isikhunta efanayo ngokuphindaphindiwe.
Lokhu kuletha phansi izindleko sezizonke yokukhiqiza kakhulu, okwenza umjovo ukubumba yokukhiqiza indlela kakhulu engabizi.
I nezimo of Ukusebenzisa Ukusingathwa kwendle, ukungcola
Ukwenza usebenzisa polymers plastic lunemikhawulo njengoba imikhiqizo kumele kusetshenziswa kuphela plastic polymer olulodwa.
Nokho, umjovo udini inikeza unenkululeko sikhiqiza imikhiqizo usebenzisa inhlanganisela ka polymers plastic. Abakwazi ukhethe inhlanganisela umhlabeleli izinto zokusetshenziswa okuzokwenza abenzele ikhwalithi oyifunayo komkhiqizo ekusebenziseni wawo ahlose ukuba usetshenziswe.
Ngaphezu ngokukhetha inhlanganisela inhlaka plastic zokukhiqiza, abakhiqizi Ungakhetha futhi anhlobonhlobo imibala usebenzisa umjovo ekubumbeni.
Umjovo udini inqubo sesishintshile futhi savela kakhulu ekuhambeni kwesikhathi. Imboni isiba eco-nobungane futhi esimeme . Okwamuva izinqubo ukukhiqizwa kuholele kancane kakhulu Scrap plastic ngesikhathi ukukhiqizwa.
Imishini emisha nazo kakhulu eyonga ugesi usebenzise okungenani 20-50% amandla esingaphansi imishini amadala.
Isicelo avamile Injection Molding
Umjovo udini iyasetshenziswa yokukhiqiza imikhiqizo eminingi ngokuvamile esetshenziselwa ukwenza yithi ekuphileni kwethu kwansuku zonke. Imikhiqizo ekhiqizwa ngomjovo ekubumbeni kukhona asezingeni elifanele kakhulu, okuhambisana, futhi isikhathi eside kakhulu.
Ezinye izinhlelo zokusebenza ezivamile Umjovo udini zibalulwe lapha ngenzansi:
Imishini yezokwelapha kuthiwa ngokwandayo ekhiqizwa usebenzisa muphi umjovo inqubo yokubumba. Idivayisi yezokwelapha embonini usebenzisa umjovo udini ukhula kancane kancane ngesikhathi 6% ngonyaka.
Ngo-2012, bangaphezu kuka- 755 kwezigidi ezingu amakhilogremu plastic ladliwa for yokukhiqiza bemishini yezokwelapha futhi imishini usebenzisa umjovo ekubumbeni. Imikhiqizo ekhiqizwa kukhona asezingeni eliphezulu kakhulu, enembile, futhi unikele ukusebenza okuthuthukisiwe.
Imikhiqizo ekhiqizwa in nezindleko kancane kakhulu okwenza kube nokwenzeka ukuba bachithe kubo ngemva kokusebenzisa futhi ugweme usebenzise kubo emva inzalo. Lokhu kunciphisa ingozi yokutheleleka kanye nesikhathi sokulungiselela amadivaysi.
Umjovo udini is osetshenziswa kakhulu ngoba yokukhiqiza eliphezulu izingxenye yezimoto. Kulinganiselwa ukuthi cishe 90% of the izingxenye esetshenziswa izimoto ekhiqizwa usebenzisa umjovo ekubumbeni.
Inqubo umjovo udini kuyasiza akhiqize eliphezulu izingxenye okuyizinto kakhulu eqondile neqhubekayo okuyinto ebaluleke kakhulu embonini yezimoto ukuqinisekisa ukuphepha.
Lezi zingxenye futhi engasindi esiza ukuthuthukisa uphethiloli nekghono. Izingxenye kunamandla kakhulu futhi iqine ethuthukisa ukuphepha jikelele abagibeli.
Daily kanye nokusebenzisa kabusho imikhiqizo
Abaningi imikhiqizo evame ukusetshenziswa esetshenziswa ekuphileni kwethu kwansuku zonke ekhiqizwa usebenzisa umjovo ekubumbeni. Imikhiqizo efana amabhodlela epulasitiki, nezipakupaku, amathoyizi, ifenisha njll oluqanjwe inqubo umjovo ekubumbeni.
Imikhiqizo ekhiqizwa kukhona engasindi, okuhlala, kanye nomthelela ukumelana iqinisekisa yokuphila kwabo isikhathi eside. Isicelo Umjovo udini e yokukhiqiza imikhiqizo ukusetshenziswa nsuku zonke kwanda.
Consumables kanye Electronics
I okudlekayo nezinto elekthronikhi asetshenziswa ngokuvamile nazo kabanzi ekhiqizwa usebenzisa ubuchwepheshe umjovo ekubumbeni.
imikhiqizo Electronic nezinsiza ezifana nomakhalekhukhwini, umakhalekhukhwini izesekeli efana casings, earphones, ithebhulethi nesembozo, umzimba ikhamera, izilawuli kude, izingxenye electronic-TV kanye nama-computer njll ekhiqizwa usebenzisa umjovo ekubumbeni.
Le mikhiqizo kungenziwa ekhiqizwa ngobuningi nge ukungaguquguquki okusezingeni eliphezulu ngomjovo ekubumbeni. Ngenxa ukuzivumelanisa nezimo ukuze ngokukhetha inhlanganisela amapulasitiki zokukhiqiza, le mikhiqizo kunamandla kakhulu futhi isikhathi eside.
Okufakiwe ingenye zokusebenza ezivamile Umjovo udini. Isembozo esetshenziselwa ukudla non-ukudla izinto kusetshenziswa umjovo ekubumbeni.
Isembozo kugcina imikhiqizo ephephile futhi umonakalo khulula ngesikhathi sezokuthutha umphakathi. Ngo-2016, emaphaketheni kwaba ehola umjovo udini isicelo nge funa ingqikithi 43.385 kilotons .
Umjovo udini uthola isicelo ebanzi ku nokukhiqizwa kwemikhiqizo ezihlobene ukwakhiwa kanye ingcebo umkhakha.
Ukusebenzisa plastic kunezinzuzo eziningi njengoba kuyinto alula kakhulu kunomoya ukhuni nensimbi. Iphinde inikeza inzuzo elikhethiwe kokuba kabusha.
Eminye imikhiqizo ngokuvamile ezisetshenziswa embonini yezokwakha oluqanjwe umjovo udini zihlanganisa ukufulela izimbobo, ukubiya gaskets, emphemeni iziqobosho, iwindi futhi izingxenye umnyango Uhlaka njll